Mikambana ao amin'ny Cast of the Echo 3 Series ho an'ny Apple TV + | i Michiel Huisman Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny voalohan'ny volana Mey Variety dia nilaza fa hanatevin-daharana ny mpilalao Echo 3 i Luke Evans, andiany iray izay mbola tsy henontsika tao anatin'ny herintaona. Izao indray dia Isan-karazany izay mampahafantatra anay ny momba ny mpilalao amin'ity andiany ity, mpilalao iray vao niditra ny mpilalao sarimihetsika Michiel Huisman.
Michiel Huisman, fantatra amin'ny Lalao amin'ny seza fiandrianana, dia handray ny asan'ny vadin'i Amber izay, miaraka amin'i Luke Evans amin'ny andraikitry ny rahalahin'i Amber, dia hiandraikitra ny famotopotorana ny fanjavonany eo amin'ny sisintany manelanelana an'i Kolombia sy Venezoela. Samy manana ny niainany taloha sy ny raharaha miaramila.
Ankoatry ny nandraisany anjara tamin'ny vanim-potoana roa tamin'ny andian-dahatsoratra Game of Thrones, ilay mpilalao teratany holandey Michiel Huisman koa dia nandray anjara tamin'ny andiany toy ny Ny ozon'ny Hill House, Orphan Black, Nashville y Ny Mpanatrika sidina ary amin'ny horonantsary One Last Favor, Rescue in the Red Sea, The Appointed Hour, Ady lehibe Z sns.
Ny andiany Echo 3 dia hotarihin'i Mark Goal, mpanoratra ny sarimihetsika an'i Kathryn Biguelow En Tierra Hostil, hotifirina amin'ny teny Anglisy sy Espaniôla ary miorina amin'ny andian-tantara israeliana Rehefa manidina ny mahery fo (Rehefa misy Heroes Fly hita ao amin'ny Netflix), mifototra amin'ny ilay tantara mitondra ny anarana mitovy nosoratan'i Amir Gutfreund.
Ireo mpamokatra an'ity andiany ity dia, ankoatra an'i Mark Goal, Jason Horwitch miaraka amin'i Peter Traugoot, Omri Givon, Eitan Mansuri ankoatry ny hafa. Mikasika ny daty namoahana azy dia tsy fantatra izany amin'izao fotoana izao, satria raha ny filazan'ny Variety dia mbola tsy feno ny mpilalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mikambana amin'ny andiany Echo 3 ho an'ny Apple TV + i Michiel Huisman